Masoivohom-Baovaom-Panjakana Rosiana Mahazo Fanavaozana Mifanaraka Amin’izay Ilain’ny Mpitondra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Desambra 2013 7:23 GMT
RIA Novosti, iray amin'ireo masoivohom-baovao goavana indrindra sy tena be mpahalala, no tsy ho tafavoaka velona amin'ity ririnina ity. Ny Alatsinainy 9 Desambra 2013, teo am-pifohazana no nahitan'ireo mpiasan'ny masoivohom-baovao iraisam-pirenena izay an'ny fanjakana ny didy vaovao avy amin'ny fiadidiana ny lapam-panjakana ho ‘fandravàna’ ny fisian'izy ireo. Somary hafahafa ihany, tsy hatairana ho an'ny mpitantana ny filazam-baovao sy ireo mpitantana eo antenantenany ihany ilay vaovao, fa ho an'i Svetlana Mironyuk, talen'ilay masoivoho ihany koa. Nipoitra ety anaty aterineto ny lahatsary [ru] ahitàna an'i Mironyuk manazava amin'ireo mpiray asa aminy mikasika ilay vaovao tsy nampoizina. Hita ho voadona ihany, misy fotoana i Mironyuk miezaka mitàna ranomaso eo ampisaorana ireo namany noho ny asa naton'izy ireo nandritry ny taona maro.
Maminavina ny hankatò ny RIA Novosti ho toy ny “Rossiya Segodnya” ihany koa ny governemanta. Na dia midika hoe “Russia Today” aza ny “Rossiya Segodnya”, dia hisaraka tanteraka tsy hifangaro amin'ny RT kosa izy, foibenà fahitalavitra Rosiana amin'ny fiteny Anglisy, izay nitondra izany anarana izany tany amboalohany. Ny talen'ny kabinetran'i Putin, Sergei Ivanov, nanazava fa “manohy politika tsy miandany i Rosia ary miaro mafy ny tombontsoam-pirenena. Tsy mora ny manazava izany amin'izao tontolo izao, saingy tsy maintsy manao izao isika.”
Ho an'ny Liberaly dia mihoatra noho ny ampy raha ilay vaovao mikasika ny “fandaminana vaovao” ny masoivohom-baovaom-panjakana mba hidradradradràna ny kendarorok'i Kremlin. Tamin'ny fanambaràna hoe mety ho i Dmitri Kiselyov no hitarika ny Rossiya Segodnya, onjampeo iray mpiandany sy mpanasohaso ny ao Kremlin somary manana fironana amin'ny tetiky ny Tandrefana, no toa manamafy ny tahotra be ananan-dry zareo. Tena vao haingana mihitsy no natao lohateny be i Kiselyov tany anaty gazety Tandrefana rehefa nilaza fa ny liberalisma any Soeda dia nitondra ho amin'ny fanaovana ho ara-dalàna ny resaka firaisana ara-nofon'ireo sivy taona any amin'ny firenena Tavaratra. Niantefan'ny haromotan'ny hetsi-panoherana “Euromaidan” amin'izao fotoana izao any Okraina ihany koa i Kiselyov, izay fitongilanany amin'ny governemantan'i Okraina no ijeren'ny maro azy. Tsy ela akory izay ny mpanangom-baovao iray avy amin'ny fantsom-pahitalaviny “Rossiya 1″ no natolotra niaraka tamin'ny “Oscar” mivantana tao amin'ny fahitalavitra Rosiana [ru]. Nanazava ilay nanolotra ny loka hoe “Ho an'ny fantsom-pahitalavitrao sy ho an'i Dmitri Kiselyov. Ho an'ireo laingany sy hadalàny”
Na ny mpanohana, na ny mpanohitra ny fanafoanana ny RIA Novosti dia samy toa mahita ny fiafaràn'ilay masoivoho ho toy ny fomba iray nanerena ny fampiatoana ireo kiana tsy nitsaha-nitombo nataony ny governemanta. Tahaka izay nanazavàn'ilay [ru] Rosiana nasionalista, Mikhail Golovanov [ru] azy tamin'ny fomba tsy misy olankolaka tamin'ilay namany mpanome sisikevitra, Yevgeny Minchenko, tao amin'ny Facebook :
Ny hafa taitaitra kokoa tamin'ny fivoaran-draharaha. Anaty lahatsoratra am-bilaogy iray [ru] ho an'ny Liberaly Ekho Moskvy dia midika fifandraisana vaovao eo amin'ny media sy ny fanjakana ilay fanafoanana ny RIA Novosti ho an'i Mikhail Solomatin
Tsy ny rehetra no nalahelo nahita hoe lasa ny RIA Novosti. Tao amin'ny Facebook, Yevgeniya Albats, liberaly malaza ary mpanao gazety sy mpanentana aminà onjampeo ao amin'ny Ekho Moskvy, dia nanana tombana somary nampihomehy [ru] mikasika ny zava-niseho.
Fanehoankevitra iray no nanipika hoe nanao fahotana kely nahafaty i Albats. Raha ny marina dia nandany iray lavitrisa dolara tamin'ny RIA Novosti ny governemanta fa tsy iray lavitrisa roubles. Takona ny famirapiratan'ny kiana nataon'i Albats an'i Mironyuk raha ampitahaina amin'i Darya Mitina ilay solombavambahaka fahiny tao amin'ny Douma sady mpikatroka mafàna fo avy amin'ny elatra havia, izay ketraka nahita hoe i Kiselyov no notendrena hiandraikitra ny Rossiya Segodnya saingy nanaiky [ru] sasantsasany tamin'ireo tsy fahombiazan'ny asan'ny RIA:
Tsy mbola mazava tsara izay endrika horaisin'ny “Rossiya Segodnya” vaovao. Tsy misy masoandro mamiratra toy ny taona vitsy tany aloha hatreto ny vinan'ny toekaren'i Rosia, fony Rosia noheverin'ny maro ho nahavita nanaraka ny onjan'ny Krizy Ara-Bola Erantany. Iray andro monja taorian'ny nanambaràn'ny Kremlin ilay fandravàna, nampidinin'ny FMI ny vina ho an'ny fampandrosoana ao Rosia , taona 2014. Tsy dia nampihontsona an'i Rosia loatra angamba ny hamatsy vola masoivohom-baovaom-panjakana be kiana amin'ny fotoana ilomanosany ao anaty volaben'ny solika. Miaraka amin'ny fahasahiranana mahita vola sy ny fitomboan'ny tsy fitovian-kevitra, na ny faran'izay tsy mpivadi-belirano toa an'i Kiselyov aza tsy maintsy hiafara ain'ny fihazakazahana mankany aminà fikambanana bitika tahaka ny nataon'i Mironyuk
Okraina 12 ora izay